Madaxweyne Deni iyo sababta shirka loogu celiyey Muqdisho?? – Idil News
Madaxweyne Deni iyo sababta shirka loogu celiyey Muqdisho??
Madaxweyne Deni ayaa ka mid ahaa madaxadii Soomaaliyeed ee ka qeyb gashay Shirkii Dhuusamareeb 4 ee la qabtay 1-7 Febraayo. Shirkaas oo uu ku baaqay Madaxweyne Farmajo in la isugu tago si loo dhameystiro aragti kala duwanaanshihii ka soo baxday heshiiskii Doorashooyinka ee 17 September iyo Habraacii 1da October 2020.
Arrimaha lagu kala aragti duwanaaday:
Arrimaha Gobolka Gedo
Maamulka iyo Maareeynta Doorashada Somaliland
Hufnaanta, kartida iyo Dhexdhexaadnimada Guddiga Doorashooyinka
Madaxweyne Deni wuxuu ka mid ahaa Guddigii Madaxweynayaasha ee loo xilsaaray xallinta qodobka ku saabsan khilaafaadka Gobolka Gedo iyo qabsoomidda Doorashooyinka ee degmada Garbahaarey.
Doodo qaatay saacado fara badan iyo maalmo kaddib waxaa hubaal ah in heshiis lagu gaaro Dhuusamareeb in ahayd arrin aad u dhow, lana xalliyay khilaafadkii jiray 80%.
Madaxweyne Deni iyo kooxda la shaqeynaysay waxay u arkeen in Gedo looga baahan yahay:
Xabbad joojin deg deg ah
Heshiis leh dhowr heer mid dhow, mid dhexe iyo mid mustaqbal.
Madaxweyne Deni wuxuu soo bandhigay”
In Guddi ka kooban 4 Wasiir la magacaabo
In lagu dhawaaqo xabbad joojin
In Guddigu uu qabto shirar dib u heshiineed
In PL, JL iyo Dowladda Dhexe taageeraan dib u heshiisiinta dhinacyada Farsamada, Dhaqaalaha iyo wadahadalka
In markaas kaddib Madaxweynaha JL soo dhiso Maamulka Gobolka Gedo iyo Degmada Garbahaarey ee loo dhan yahay oo ka soo unkamay dib u heshiisiinta
Nasiiba wanaag, Md Axmed Madoobe waa aqbalay waana ka tanaasulay arrimo fara badan oo uu tirsanayey oo ay ka mid ahayd hagardaamo balaaran oo isugu jirtay curyaamin dhaqaale, siyaasadeed iyo Amni oo Dowladda iyo Shacabka JL ay kala kulmeen Dowladda Madaxweyne Farmaajo 4tii sano ee la soo dhaafay.
Nasiib darro, Madaxweyne Farmaajo waa ka hor yimid arrintaas, shirkiina wuu ka soo baxay.
Sidoo kale Madaxweyne Qoor Qoor,ayaa ka Carooday in ay ku qanci waayay MD Farmaajo dadaalkoodii.
Madaxweyne Deni oo ugu danbeeyey ilaa sagaal saac oo habeenimo,ayuu isku dayay in uu ku qanciyo Farmaajo in uusan shirka ka tegin, balse ma suurto gelin.
Haddaba, sidee Farmaajo ku keenay in uu shirkii u shalay ka soo tegay ee asagu fashiliyey, hadanacu doonayaa in uu si la mid ah Deni iyo PL qoorta ugu suro arrimo aan lagu heshiin.
Nasiib wanaag MD Deni,ayaa sida saxda u sheegay in maanta talada la balaariyo oo Muqdisho layskugu tago,si halkaasoo ay ku dhan yihiin Gudoonka labada Aqal, Murashaxiinta iyo Beesha Caalamka loola soo dhowaado si loo dhamaystiro shirkii Dhuusamareeb 4.